Somaliland: Dawladda Itoobiya oo ka Hadashay Mowqifka Somaliland Iska Taagtay Qoddob ku Jiray War-murtiyeedkii IGAD - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dawladda Itoobiya oo ka Hadashay Mowqifka Somaliland Iska Taagtay...
Warbixin Todobaadle ah oo Wasaaradda Khaarajiga Itoobiya soo Saarto oo lagu Baahiyay Jawaabtii Madaxweyne Siilaanyo Ee Shirkii IGAD
Wasaaradda Arrimaha dibadda dawladda Fedaraalka Itoobiya, ayaa warbixinteeda toddobaadlaha ah ee ay ka qorto dalalka Mandaqadda Geeska Afrika, waxay shalay ku baahisay jawaabtii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ku naqdiyay qoddob ku jiray war-murtiyeedkii ka soo baxay shir madaxeedkii urur-goboleedka IGAD ee toddobaadkii hore ku qabsoomay Magaaladda Muqdisho ee dalka qalalaasuhu hadheeyay ee Soomaaliya.
Sida lagu daabacay shabakadda wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay werisay in madaxweyne Siilaanyo cambaareeyay qoddobkii ku wajahnaa midnimadda Soomaaliya ee ku jiray war-saxaafadeedkii laga soo saaray gunaanadkii shirkii 28-aad ee aan caadiga ahayn ee IGAD. “Madaxweynaha Somaliland,Axmed Maxamed Siilaanyo, wuxuu cambaareeyay Arbacadii 14-kii Bishan September war-saxaafadeedkii shirkii IGAD gaar ahaan qoddobkii ay dib ugu xaqiijinayeen madax-banaanida dhuleed, siyaasadeed iyo midnimadda Soomaaliya,”ayaa lagu yidhi warbixintaas todobaadlaha ah.
Warbixintu waxay intaas ku dartay “Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay inaanu qoddobkaasi aanu ahayn mid ka turjumaya xaaladda dhabta ah ee ka jirta Somalia iyo Somaliland-ba. Kama mid nihin, qeyb-na kama nihin maamul goboleedyadda Soomaaliya.”
Wasaaradda Khaarjiga Itoobiya waxay warbinteeda ku iftiimisay in madaxweyne Siilaanyo caddeeyay “In siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee xilligan ku sugan Muqdisho aanay matalin Somaliland isla markaana aanay wakiil ka ahayn shacabka Somaliland.”
Dawladdaha Somaliland iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya cilaaqaad saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi oo ay iskaga kaashadaan dhinacyadda adkaynta Nabad-gelyadda, Ganacsiga iyo la dagaalanka argagixisadda caalamiga ah.